A.K.N CONSTRUCTION GROUP: January 2012
မိမိနေရာလေးလဲ မပျောက်အောင် လင့်တွေကို ညွန်းရအောင်
Aung Kyaw Min On Wednesday, September 9, 2009
မိမိ ဘလော့ဂ်လေးမှာ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကို ညွှန်းချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိနှစ်သက်ရာ site များကို ညွှန်းချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် မိမိနေရာလေးလဲ မပျောက် စာမျက်နှာ အသစ်တစ်ခု အဖြစ်ထွက်ချင်ရင် သုံးလို့ရတဲ့နည်းလေးတစ်ခုပါ. လုပ်ရမှာက blogger.com မှာ signin လုပ်ပါ. Layout> Page Elements> AddaGadget> ကိုဖွင့်ပါ.
Blog List ထဲကိုဝင်ပါ. အမှန်ခြစ်ထားတာတွေကို ဖြုတ်ပြီး Icon တစ်ခုကိုပဲ ချန်ထားပါ. Title ခေါင်းစဉ်ထည့်ချင်ရင်ထည့်ပါ. မထည့်ရင်လည်းရပါတယ်. ADD TO LIST ကိုဖွင့်ပြီး ....
box လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်. Add by URL နေရာမှာ ကိုညွှန်းချင်တဲ့ လိပ်စာကိုထည့်ပြီး. ADD ကိုကလစ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါ. မှတ်သွားပါလိမ့်မယ်.
အဲဒီမှာ ကိုညွန်းလိုက်တဲ့ လိပ်စာ မူရင်းအတိုင်း ထွက်နေပါလိမ့်မယ်. ဒါကို အမည်ပြောင်းချင်တယ်. Logo လေးတွေ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်. remane ကိုကလစ်ပါ. box လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်. ကိုယ်ကြိုက်သလိုပြင်ရေးပါတော့.
တကယ်လို့ Logo လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်. photoshop ထဲမှာလုပ်လုပ် အပြင်ကပဲယူယူ. ဖိုင်လေးကို hosting site တစ်ခုမှာ တင်ပြီး HTML Hotlink နားက code ကို copy ယူပြီး ထည့်ပြောင်းယုံပါ. သတိထားရမှာက hosting site လိပ်စာလေးကို ဖျက်ပေးရမှာပါ. ဒါဆို မိမိ လုပ်ထားတဲ့ logo လေးနဲ့ ညွန်းထားတာကို ရပါလိမ့်မယ်. ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိစာမျက်နှာလေးလဲမပျောက်ပဲ. တခြားတစ်ခုနဲ့ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းဆိုက်၊ မိမိနှစ်သက်တဲ့ ဆိုက် ကို သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်. အများစုက Link List နဲ့ ညွန်းတတ်ကြပါတယ်. ဒါဆို မိမိနေရာပျောက်ပြီး အခြားတစ်ခုနားကို ရောက်သွားပါတော့တယ်. ကိုယ်နေရာလေးလဲမပျောက် သွားနိုင်တဲ့နည်းလေးပါ.ခေါင်းစဉ်တွေခွဲပြီး ကြိုက်သလောက်လုပ်လို့ရပါတယ်. ဥာဏ်ရှိသလိုပေါ့. ကျွန်တော့် ဘလော့လေးမှာ ဒီလိုလုပ်ထားတာပါ. ညီနေမင်းဆိုတဲ့ မှိတ်တုပ်မှတ်တုပ် လေးကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာပါ. မိမိ စောင့်ဖတ်နေကျဆို အထက်က ကျွန်တော် အမှန်လေးတွေ ဖြုတ်ခိုင်တဲ့နေရာမှာ မဖြုတ်ရင် ပို့စ်အသစ်တွေ တင်တိုင်း မြင်နေရပါလိမ်မယ်. သိသလောက်လေးပါ. အဆင်ပြေကြပါစေ.